Maamulka Shabeelaha Hoose oo dacwad ka gudbiyay AMISOM – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 16 April 2016
Baraawe ( Mareeg)-Guddoomiye ku xigeenka dhinaca Amniga iyo Siyaasadda maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose Cali Nuur Maxamed ayaa sheegay in ay u gudbiyeen dowladda Federaalka dacwad ka dhan ah Ciidamada AMISOM.
Mr Cali Nuure ayaa xaqiijiyay in AMISOM ay dhibaatooyin kala duwan u geystaan dadka shacabka ah , ayna ugu dambeysay falkii maanta 4 qof oo shacab ah ay ku dileen.
Ciidamada AMISOM ayaa horay Magaalada Marka ee Gobolkaasi Shabeelaha Hoose waxa ay ku dileen tiro dad shacab ahaa.
Ugu dambeyn guddoomiye ku xigeenka dhinaca Amniga iyo siyaasadda ee maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda ay aalaaba sheegto in ay baareyso falalka dhibaatooyinka ah ee AMISOM shacabka kula kacaan.